दीपाश्रीले मागिन् हमालका फ्यानसँग माफी « Kakharaa
दीपाश्रीले मागिन् हमालका फ्यानसँग माफी
१८ असार, काठमाडौं । एउटा टेलिभिजनमा निर्देशक तथा अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाले कसरी राजेश हमाल महानायक ? तपाईले बनाइदिएको हो ? उहाँ त एउटा नेपाली फिल्म क्षेत्रको हिस्सा हो भनेपछि विवादमा परेकी थिइन् । आफु विवादमा परेपछि दीपाश्री निरौलाले फेसबुक स्टाटस मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी छन् ।
उनले फेसबुक स्टाटसमा भगवानको नाम लिएर आफ्ना भनाई सार्वजनिक गरेकी छन् । उनी लेऋिछन्, ‘भगवान रामले एउटा सामान्य नागरिकको कुरा सुनेर सीता मातालाई जंगल पठाएको कुराको ठूलो विरोध भयो । स्वयं भगवान राम पनि आलोचनाका पात्र हुन पुगे । जसका कारण श्री कृष्ण भगवानमाथि पनि बेला बेलामा औंला उठाइयो ।’ उनले थप लेख्छिन् ,‘मैले चलचित्र क्षेत्रको महानायक भएपछि चलचित्र क्षेत्रमा परेको बिषम परिस्थितिमा एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर, आफूलाई वर्षौंदेखि सहयोग गरेका प्राबिधिकहरूलाई परेको पीर मर्कामा सहयोगी किन हुन सक्नु भएन भन्ने आशयले यो बिषयमा बोलेको हुँ ।’
दीपाश्रीको आशय भनेको अभिनेता राजेश हमाल महानायक भएको भए लकडाउनका बेला भोकभोकै परेका प्राविधिकहरुलाई किन केहि सहयोग गर्न सकेनन् भन्ने कुरा थियो । तर कुराले अर्कै मोड लिएपछि उनको चर्को विरोध भएको हो । उनले सबैसँग गुनासो गर्न पाइन्छ भनेकी छन् । उनले उदाहरण दिदै भनिन् ,‘के प्रधानमन्त्री, के महानायक, के कलाकार अथवा के भगवान, सबैसंग गुनासो गर्न पाइन्छ । एउटा उच्च सम्मानमा बसेको मान्छेबाट केहि आशा पनि हुन्छ नै मेरो आशय त्यति मात्रा हो । राजेश हमाललाई सुपरस्टार नै होइन भन्ने हैसियत मेरो थिएन , छैन र हुने पनि छैन । ’
एक टेलिभिजनमा दिएको अन्तरवार्ताको कुरालाई मोडेकी छन् । उनले पुरानो कुरा सम्झाउन खोजेकी छन् । आफुले महानायक राजेश हमाललाई सम्मान गर्ने गरेको बताएकी छन । उनले कतिको सम्मान गर्छु भन्ने कुरा हेर्नको लागि मुन्द्रेको कमेडि क्लब हेर्न अनुरोध गरेकी छन् । उनले त्यो बेला आफुले अत्यन्त सम्मान गरेको बताएकी छन् । उनले आफ्नो अतित सम्झदै भनेकी छन् , ‘ काठमाडौंमा पाउरोटी समेत खान नपाएर संघर्ष गरेर यो स्थानमा आएकी म सामान्य कलाकार हुँ ।’ आफुले कहिलै घमण्ड नगरेको र विगतले आफुलाई घमन्ड गर्ने अनुमति नदिने उनले बबताएकी छन् । आफुल यो क्षेत्रमा ३० वर्ष देखि लागेको बताउदै आफु टुप्पोबाट नपलाएको उनको भनाई छ ।
उनले थपिन् ‘हमालज्यू सुपरस्टार हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र पछिसम्म रहि रहनु हुनेछ ।महानायकको हिसाबमा चलचित्र क्षेत्रको पीडामा मलम पनि लगाउन सक्नुपर्छ नत्र त्यो पदमा शंका उत्पन्न हुन्छ पनि भन्न नपाइने गरेर उहाँलाई भगवान नै बनाउने पक्षमा म थिइन र छैन पनि । ’ उनले आफुले बोल्दा सुपरस्टार नै होइन भन्ने बुझिन गएकोमा भने राजेश हमालज्यूको फ्यानहरूसंग माफी मागेकी छन् । उनले अव अन्तर्वार्ता दिँदा, पत्रकारको आशय र उसको उदेश्य बुझेर शब्द संयोजनमा सचेत भएर जवाव दिने बताएकी छन् ।
आफु महिला कलाकार भएकोले असभ्य गाली, पचाउनै नस्कने आरोपहरू, सुन्न पनि हिच्किचाइनु पर्ने शब्दहरुलाई सामान्य रूपमा लिएको बताएकी छन् । उनको अन्तरवार्ताको भिडियो हेरेर अश्लिल शब्द प्रयोग भएकोमा भने दुखी भएकी छन् । उनले तपाईको घरमा दिदी बैनीले बाटो बिराउँदा यस्तै शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेकी छन् । उनले अन्तमा भनेकी छन् ,‘अब मलाइ साँच्चिकै माया गर्ने , मेरो त्रुटिमा मन दुखाउने र सूझावहरू दिने आदरणिय महानुभावहरूप्रति त म सधैँ झैँ नतमस्तक छु । मेरो कारणले मन दुखेको होला क्षमा चाहन्छु है !’